အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု | Cultural resources from the Refugee Center Online | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
Learn some things to say and do so you can be polite in the USA. ဆက်ဖတ်ရန်
အမေရိကန်သူငယ်ချင်းများ Making: အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းပေါင်းစည်းကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံအမေရိကန်မိတ်ဆွေများကို Making. ဒါဟာပုံပြင်တစ်ခုကိုမှန်ကန်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်လူဦးတွေ့ဆုံကဲ့သို့ဖြစ်၏ဘယ်အရာကိုပြသသည်။